Gịnị bụ igwe ojii lenticular na otu esi akpụ ha | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọtụtụ ndị mmadụ hiere ụzọ igwe ojii maka UFO. Onye obula huru ihe ndia ụdị igwe ojii Ha echewo na ihe ekere eke na-achị ndụ dị n'èzí mbara ụwa anyị ọchị. Otú ọ dị, nke a abụghị eziokwu. Mmekọrịta ndị a n’eluigwe bụ maka ịdị adị nke lenticular n'ígwé ojii. Ha bụ ụdị igwe ojii nke nwere ọdịdị nke ite ma ọ bụ ntụgharị ntụgharị nke na-apụtakarị na mpaghara ugwu.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe igwe ojii ndị a lenticular bụ na otu esi akpụ ha. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata ihe omimi ndị a, nke a bụ ọkwa gị 🙂
1 Kedu ihe bụ igwe ojii lenticular?
2 Usoro ọzụzụ
3 Ọnọdụ dị mkpa maka ọzụzụ ha
4 Gini mere iji zere ifefe na nso igwe ojii?
Kedu ihe bụ igwe ojii lenticular?
Dị ka anyị kwuru, Ha bụ ụdị igwe ojii nke nwere saucer ma ọ bụ ọdịdị UFO nke ahụ gosikwara n’ebe ndị bụ́ ugwu ugwu. Ugbua na ọ na-apụta naanị n'ugwu nwere ike inye anyị nkọwa nke ọnọdụ ọzụzụ na ọ kwesịrị ịpụta dị ka nke a. Ha bụ igwe ojii na-etolite na troposphere, nke ahụ bụ, na kasị ala nke oyi akwa nke ikuku.
Njirimara igwe ojii a bụ nke altocumulus. N'adịghị ka Altocumulus nkịtị, ọ bụ ụdị na lenticular ụdị (nke ndị ọkà mmụta sayensị kpọrọ altocumulus lenticularis). O nwekwara ike buru ụdị nke ịgba larịị lenticular cirrocumulus ma ọ bụ nke lenticular stratocumulus. Ndị a formations dabere na gburugburu ebe obibi na ikuku na ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị ka ifufe ọchịchị, na ikuku ikuku, na iru mmiri ma ọ bụ okpomoku enwere n'oge ahụ.
Akụkụ kachasị dị iche iche nke igwe ojii a bụ na ha na-eme ka ala mara mma ma na-agbagwoju anya ọtụtụ oge na UFO sightings.
Ka anyị nwee ike kpochapụ ihe niile amaghi banyere ụkọ igwe ojii a, anyị ga-akọwa mmalite mmalite ha. Dị ka anyị kwuru na mbụ, ọ chọrọ ọnọdụ ikuku na gburugburu ebe obibi dị iche iche ị ga-eme. Ihe mbụ bụ elu mmiri na-adịghị ike ma na-ezute ntụgharị na ikuku. Ọnọdụ ndị a nwere ike ime na mpaghara ugwu, ebe ikuku, ozugbo ọ dabara na ntọala nkume, a manyere ịrịgo.
Ugwu bu ihe nkpachi nye ikuku nke ikuku na ikuku ma nye ya ihe omuma di ka Foëhn mmetụta. Mgbe ị na-agagharị site na ikuku na ihu elu na ntụgharị ihu igwe a na-eme ọgba aghara nke a na-ahazi dị ka ọgba aghara igwe. Ikuku n’ikpeazụ rita elu ya n’ọ̀tụ̀tụ̀ dị ala karịa ka ọ dị n’elu ma ọ bụ n’akụkụ ala.
Ka ọ na-aga n'ihu na-agbago elu na elu site na mbara igwe, ọnọdụ okpomọkụ na-aga n'ihu na-agbadata n'ihu ma na-aga n'ihu n'ihi ntụgharị ihu igwe. Ọ bụrụ na ikuku nke gbagoro n’elu ugwu ahụ bụ iru mmiri, ya bụ, ọ na-ejupụta na tụlee mmiri, iru mmiri ahụ na-eloda ka ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ ahụ na-ebelata n’ọ̀tụ̀tụ̀ ebe ọ bụ na ọ na-eru ebe igirigi dị. Ka ikuku na-arị elu na-asọ oyi, anyị na-ahụ guzobe igwe ojii nke na-eto n’elu ugwu ahụ na na, mgbe ị zutere ntụgharị ihu igwe, igwe ojii lenticular ga-apụta.
Ọnọdụ dị mkpa maka ọzụzụ ha
O doro anya na ị na-eche na enwere ihu igwe na mgbe ọ bụla, na ka anyị na-arịgo na elu, ọ dị oyi. Yabụ, igwe ojii lenticular ga-adịkarị. Ọ bụ eziokwu na, n'ozuzu, akwa oyi akwa nke ikuku dị jụụ karịa nke dị ala. A na-enye ndị a dị ala nri site na ikpo ọkụ nke si na ala wepụta mgbe radieshon nke anyanwụ n'elu ala.
Ma ọ dịghị mkpa ime nke a mgbe nile. O nwere oge mgbe ala na-ajụkarị oyi n'ihi oke nbelata ọkụ nke anwụ na-ada n'elu ma ọ bụ ọbụlagodi agba nke ekwuru n'elu (cheta na agba ọchịchịrị na-amịkọ ọkụ ma ndị ọcha na-egosipụta ya. a na-akpọ ya albedo). N'ọnọdụ ebe ala dị oyi, ala n’onwe ya nwere ike ịmịcha ọkụ niile site na ikuku gbara ya gburugburu, na-eme ka ikuku dị ala dị na elu dị elu karịa nke elu. Ọ bụ n'ọnọdụ a ka anyị na-ahụ ntụgharị ihu igwe.
Mpaghara ndị nwere ntụgharị ihu igwe na-adịkarị ogologo oge, nke mere na ikuku, mgbe ị na-achọ ịrịgo ugwu ahụ, ga-ewepụ ikuku dị elu nke ga-alaghachi na-eke ebe ndị na-anọghị ọdụ ha na-ekpuchi mmiri mechiri emechi ma na-enye igwe ojii ụdị lenticular. Nke a bụ ihe kpatara igwe ojii ndị a ji dị ka UFO ma bụrụ nke hiere ụzọ maka ha ọtụtụ oge.
Gini mere iji zere ifefe na nso igwe ojii?
A na-ekwukarị na ndị na-anya ụgbọ elu na-anwa ego ọ bụla iji gbochie ifefe na mpaghara igwe ojii dị nso. Ka anyị hụ ihe mere nke a ji mee. Dika igwe ojii lenticular na-etolite mgbe ikuku di O siri ike ma bia kwaa mmiri, ịrị ugwu na odide ka ị na-agbago bụ nnọọ ngwa ngwa. Site na ịnwe akwa ntụpọ dị elu nke ntụgharị ihu igwe dị elu, ọ na-eme ka ikuku na-erugharị ogologo oge na ọkwa elu.
A pụkwara ịchọta usoro igwe ojii ndị a mgbe igwe ikuku abụọ na-emegiderịta onwe ha ga-emekọ ma mee ka akụkụ kachasị sie ike na-ebili na ikuku oyi na-ewere ọnọdụ nke ihe mgbochi igwe. Ihe kpatara na ndị na-anya ụgbọ elu achọghị ịfe n'ụgbọ ndị a bụ n'ihi na njirimara ifufe metụtara igwe ojii a siri ike ma na-aga n'ihu ma nwee ike ibute mmebi siri ike na ụgbọ elu.
N'aka nke ọzọ, ụdị ikuku a na-achọsi ike na ụgbọ elu ndị ahụ na-anaghị eji injin ahụ ebe ọ bụ na a na-eji usoro ikuku eme atụmatụ nke ọma ma jigide ụgbọ elu ahụ ogologo oge. A ịmata bụ na ụwa ndekọ maka ife efe emezuola ya site na ikuku ikuku nke na-enye igwe ojii lenticular.
Enwere m olileanya na ozi a na-enyere gị aka ịmụtakwu banyere ụdị igwe ojii a na nhazi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Igwe ojii Lenticular
Ọ dị mma, mana foto a na-ese foto. Ihe mbụ dị mma.
Fermi eju anya